छोरीमाथि करणी आरोपमा पक्राउ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
छोरीमाथि करणी आरोपमा पक्राउ
काठमाडौँ — आफ्नै १८ वर्षीया छोरीमाथि करणी गरेको आरोपमा प्रहरी परिसर ललितपुरले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । छोरीको परिचय खुल्ने कारणले प्रहरीले उनको नाम पनि गोप्य राखेको छ । परिसर ललितपुरका प्रवक्ता डिएसपी नारायण चिमोरियाका अनुसार सोमबार छोरीले दिएको जाहेरीका आधारमा बाबु पक्राउ परेका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका बाबुले आफू ५ वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहसचिव रहेको र त्यतिबेला निलम्बित भएको बताएका छन् । तर, प्रहरीले उनको दाबीलाई पुष्टि गरिसकेको छैन ।
प्रवक्ता डिएसपी चिमोरियाका अनुसार मंगलबार मात्रै ५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत ललितपुरबाट अनुमति लिइएको छ । प्रहरीले उनीमाथि जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ १८:५२
महानगरको अन्य भेकको त के कुरा गरि भयो र ? मुसलधारे वर्षा हुँदा वा दिनभरी पानी पर्दा यहाँ के हुन्छ होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सबैतिर पूर्वाधार निर्माण नसकिंदा ढल र नाला भरिएर पानीले निकास नपाउनु एवं अवैज्ञानिक योजनाले सडकको उचाइँ घरपसलको सतहको समानान्तर वा त्योभन्दा बढी हुँदा वर्षामा यो महानगरमा जतात्यतै पानी जमेर स–साना अस्थायी पोखरीहरु बन्न पुग्छ ।
मुख्य सरकारी कार्यालय, अस्पताल र सँघसंस्था भएको हस्पिटल चोक वरिपरिकालाई अति आवश्यक कामकालागि बाहिर निस्कँदा र अरुतिरकालाई यहाँ आउनलाई पनि सोच्नै पर्छ । पत्रपत्रिका र औषधी किन्न एवं बिरामी भेट्न अस्पताल आएकाहरु पानी भरिएर नदेखिने खाल्डामा लडिरहेका हुन्छन् ।
हल्का वर्षामा पनि ठाउँठाउँमा पानी भरिएर आवागमन अवरुद्ध हुनु महानगर विराटनगरको नयाँ समस्या होइन । तर आधाअधुरा निर्माणले समस्या झनै बल्झिएको छ । सबैतिर जारी पूर्वाधार विकासको काम सकिएपछि वर्षामा हिलामय र घाम लागेको बेला धुलामय हुने अवस्थाको अन्त्य हुने महानगरपालिका कार्यालयका पदाधिकारीहरुले भनिरहेकै छन् ।
उहिलेदेखि रोकिएको कामले गति लिएकाले नागरिक समाज खुशी हुनुपर्ने र अर्को वर्षसम्म महानगरको स्वरुप फेरिइ सकिने उनीहरुको दाबी छ । तर सबैतिर मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित नाला तथा सडक नबनेकाले वर्षामा यि बाधाअड्चन आइराख्ने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयको अनुसार सडकको सतह र नालाको उचाइँ घरहरुभन्दा बढी हुँदा वर्षाको पानीले निकास पाइरहेको छैन । अर्कोतिर महानगरबासीको महत्वपूर्ण साझा सवाल ‘जनतालाई पीडा दिने गरी जेठ/असारमै विकास किन ? अरु बेला गर्दा हुन्न र ?’